अाज कतै जादै वा केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्नुस अाजको तपाँर्इको भाग्यफल ! – Online Khabar 24
अाज कतै जादै वा केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्नुस अाजको तपाँर्इको भाग्यफल !
October 29, 2021 by admin admin
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevधर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको ड रलाग्दो भबिस्यवाणी – राजा, रबि र देश, २०७८ मा यति ठुला ख’त’राहरु आउदै छन्, बा’ढी प’हिरो ? हेर्नुस के के ?
nextटिकटकमा भाईरल जोडी सुरज-सिमा पहिलो पटक मिडियामा । लोभलाग्दो प्रेमदेखि झगडा, हसाएरै मुर्छा पारे (भिडियो हेर्नुस)